Pejy 6 - Lisitry ny mpiady anaty fahitalavitra izay mety tsy hitanao - Wwe
Lisitry ny mpiady anaty fahitalavitra izay mety tsy hitanao
# 2 'Rowdy' Roddy Piper ao amin'ny 'Sunny foana any Philadelphia'
Piper dia nanolotra foana ny anjara asany.
Raha mbola tsy nijery an'ity seho ity sy hatsikana hatsikana ianao dia tsy ho fantatrao izay tsy hitanao. Maizina sy mahatsikaiky.
Piper dia naseho tamin'ny fizarana roa tamin'ny hatsikana maizina Sunny foana any Philadelphia . Ny voalohany dia mitondra ny lohateny hoe 'The Gang Wrestles for the Troops', noho izany fantatrao fa misy mpiady pro ho eo amin'ilay seho.
Soa ihany ho antsika fa io no Piper azo isaina foana. Milalao mpilalao ady efa misasa sy efa misotro ronono antsoina hoe Da Maniac izy izay toa nipetraka teo ivelan'ny kalesin'ny gara. Izy koa dia manana kitapo chestnuts tsy ampoizina, izay nohaniny tao amin'ny seza lamosiny.
Manaiky ny hanao tolona izy satria mpanohitra ireo mpilalao fototra amin'ny hetsika asa soa ataon'ny andian-jiolahy. Tsy afaka mitolona amin'ny seho fiantrana izy satria voasambotra noho ny tapakilan'ny fijanonana tsy voaloa. Tany am-boalohany dia nihevitra ireo andian-jiolahim-boto satria izy dia maniak mpamono olona.
Mampientanentana ny fijerena ny andrana ataon'ny mpilalao ho an'ny tolona tahaka ireo personnation noforonin'izy ireo.
fifandraisana salama antony manambady
ahoana no hahalalana hoe iza ianao
ahoana no hahafantarana raha liana izy
wwe ombelahin-tongony sy tarehy mivadika 2018
Ahoana no fomba hilazana amin'ny olona tianao azy amin'ny fomba mahafatifaty